Donald Trump oo ka dambeeya Xasuuqii Bariire, Sidee ayuu u amray? – XAMAR POST
Donald Trump oo ka dambeeya Xasuuqii Bariire, Sidee ayuu u amray?
Sida laga warqabo diyaaradaha Mareykanka ayaa xasuuq u geystay 10 qof oo Soomaaliyeed kuwaas oo beeraley ahaa.
Haddaba Warbaahinta oo dib u fiirisay taariikhda ayaa soo ogaatay shaqsiga ka dambeeyo falkaan inuu yahay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasoo amray inay Soomaaliya ka mid tahay “aag dagaal” sidaas darteed aan loo meel dayi doonin duqeynta laga fulinayo.
Haddaba halkaan hoose ka akhriso warbixin ay horey u daabacday oo uu Trump kusoo saaray amarka ah in shacabka Soomaaliyeed la xasuuqo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qafiifiyey qaar ka mid ah sharciyadii looga hortageyey khasaaraha shacabka, marka ciidamada Mareykanka ay weeraro ka dhan ah argagixisada ka fuliyaan Soomaaliya.
Wareegto cusub oo kasoo baxday Trump ayaa dhabbaha u xaareysa in la xoojiyo ololaha dagaal ee ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ee Geeska Afrika.
Go’aanka Trump ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Africa (AFRICOM) siinaya awood dheeri ah oo ay ku fuliyaan duqeymo iyo weeraro dhinaca dhulka ah oo lala beegsado kooxda Al­Shabaab.
Dadka fallanqeeyna amniga ayaa sheegaya, in inkasta oo amarka Trump uu xoojin doono dagaalka ka dhanka ah argagixisada, haddana uu sidoo kale sare u qaadayo khatarta in ciidamada Mareykanka ay dilaan shacabka Soomaaliyeed.
Trump ayaa arbacadii saxiixay waregto qeybo ka mid ah Soomaaliya ku calaamadeeneysa “aag dagaal”, taasi oo macanaheedu yahay in aaggaas lagu dabai doono xeerarka aagagga dagaal muddo 180 maalmood ah.
12­kii bishii March ayaa Pentagon­ka waxa uu dalbaday awood dheeri ah oo ay ku beegsan karaan kooxaha argagixisada.
Tiro kooban oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa ku sugan Soomaaliya ayaga oo tababaro iyo talooyin siiya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom.
Ma cadda haddii go’aanka cusub ee Trump ay ka warhayso dowladda Soomaaliya, balse waa arrin la sugayo inay ka hadasho, maadaama sharcigan cusub uu kordhin doono dadka shacabka ah ee ku dhinta duqeymaha ciidamada Mareykanka.
DAAWO: Banaanbaxii xooganaa oo wali socda & Farmaajo oo Hal shardi lagu xiray
DEG DEG: DFS oo Guddi Magacawday & Xaqiiqda Bariire oo la kashifi doono